Muqdisho:-Khamiis, Oktoobar 20, 2011 (Halgan) — Ciidanka DFKM oo ay taageerayaan ciidanka AMISOM ayaa saaka waxaa ay weerar ku qaadeen degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo ka mid ah degmooyinka ay weli ku sugnaayeen ciidanka Al-shabaab.
Ciidanka AMISOM oo taageeraya kuwa DFKM ayaa waxaa ay saaka madaafiic iyo hubka culus ku garaaceen degmada Dayniile iyadoo dadkii ku noolaa degmada ay bilaabeen in ay iskaga cararaan . Ciidanka ururka Al-shabaab ayaa dagaalkoodu uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ayaa iyagu wax iska cabin xooggan ah kala hortegin marka laga reebo weeraro dhowr ah o ay ku qaadeen ciidanka AMISOM saaka ku soo duulay degmada Dayniile .
Saraakiil u hadlay ciidanka DFKM ayaa sheegay in ay inta badan degmada Dayniile ay la wareegeen iyagoo sheegay in ay qabteen dad fara badan oo ay uga shakisan yihiin in ay ka tirsanaayeen ciidanka ururka Al-shabaab, Ciidanka Al-shabaab ayaa horay u sheegay in ay wax ka bedaleen dagaalkii ka socday magaalada Muqdisho iyagoo sheegay in tabo cusub oo dagaal ay dejiyeen kuna dagaalami doonaa ciidanka shisheeyey iyo kuwa DFKM ee ku sugan magalada Muqdisho.
Goob jooge ku sugan degmada Dayniile ayaa saxaafada u sheegay in ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM ay gudaha u soo galeen degmada Dayniile waxaan ay la wareegeen xaafadda Bangala iyo xaruntii degmada Dayniile ,Saldhiga Dayniile, iyagoo ku dhawaaday Isbitaalka degmada Dayniile.
Wixii warar ah ee soo kordha kala soco Halgan.net